Valanjavaboary nasiônaly vaovao ao Makedônia Avaratra, iharan-doza noho ireo tetikasam-pampandrosoana mitohy · Global Voices teny Malagasy
Manelingelina koa ny fahazoana rano fisotro madio ny fametrahana famokarana herinaratra madinika ahodin-drano
Voadika ny 22 Jona 2022 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, English
Toeram-piasàna ao amin'ny fanorenana toby madinika famokarana herinaratra ao amin'ny Markova Reka, akaikin'i Skopje, Makedonia Avaratra. Saripika avy amina tahiry manokana, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Ity tantara ity dia niainga avy amin'ny tatitra nataon'ny Meta.mk. Dika iray nasiam-panovàna no averina avoaka etoana anatin'ny fifanarahana mifampizara votoaty nifanaovan'ny Global Voices sy ny Orina Metamorphosis.
Taona iray eo ho eo taorian'ny nanambaràn'ireo manampahefana fa mety hanorina valanjavaboary nasiônaly iray vaovao ao Makedônia Avaratra ry zareo, mbola iharan'ny fahirano hatrany ny tontolo natoraly ao aminy, raha ireo orinasa kosa mitady ny hitrandraka ampahany amin'ilay valanjavaboary sy haka tombony avy amin'ny alàlan'ireo tany. Talohan'ny namadihana ilay tany ho valanjavaboary nasiônaly, nanolotra ampahantany ny governemanta mba hanaovan'ireo orinasa fandraharahàna, ary fanampiana ara-bola hanorenana sy hitrandrahana toby madinika famokarana herinaratra, izay hàka ny ranon'ireo loharano avy any an-tendrombohitra.
Amin'izao fotoana efa maha-amperiny ny drafitra hanaovana ilay valanjavaboary izao, lavin'ireo mpandraharaha ny hamotsotra ny asa fampidiram-bolan-dry zareo.
Ao anatin'ny faritra misy ilay Valanjavaboary Nasiônaly vaovao ao an-Tendrombohitra Shar any Makedônia Avaratra, 11 ireo foibe madinika famokarana herinaratra voatsangana sy miasa, ary efatra no eo an-dalam-panorenana azy.
Ny 30 Jona 2021, ny Parlemanta ao amin'ny Repoblikan'i Makedônia Avaratra dia nandany lalàna iray manambara ny ampahany amin'ny Tendrombohitra Shar ho valanjavaboary nasiônaly, maharakotra ny 2 isanjaton'ny velarantanin'ny firenena, ahitàna farihy 28 sy loharanon-karena voajanahary marobe hafa. Miparitaka amina vohitra 30 ireo mponina miisa 26.000 ao aminy.
Ny tontolo voajanahary manerana any amin'ny faritra Balkàna dia tandindonini-doza be noho ny aterak'ireo asa fanorenana toby madinika famokarana herinaratra ahodin-drano miisa maherin'ny 2.700, izay nahazo tohana ara-bola avy amin'ireo governemantam-panjakana isankarazany. Lazain'ireo mpitsikera fa tsy nisy fandinihana araka ny tokony ho izy momba ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana ny asa fanorenana, ary difotry ny kolikoly ireo tetikasa.
Tamin'ny 2021, nilaza ny solontenan'ny governemanta fa mitady izay hampitsaharana ny asa fanorenana ry zareo ary hanàla ireo toby madinika famokarana herinaratra ahodin-drano tsy ho ao anatin'ilay valanjavaboary nasiônaly vao nofaritana ao Shar Planina. Tsy manaiky ny ho resy tsy miady anefa ireo mpitrandraka.
Ataon'ireo mpitrandraka ho toy ny takalon'aina tokoa ny tany, satria lavin'ny sasany amin'ireo mpitrandraka toby madinika famokarana herinaratra ny hampiato ny asa fanorenany raha tsy manonitra ny vola rehetra laniny ny fanjakàna.
Mandritra ireo fifampiresahana ifanaovana amin'ny governemanta amin'izao fotoana izao, iray monja ireo concessionnaire, mitantana toby roa madinika famokarana herinaratra ahodin-drano, no efa niala tanteraka sy tsy nitaky fanonerana.
Tsy namoaka ny antontam-bola takian'ireo orinasa ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fanajariana ny Tany ao Makedônia Avaratra. Nolazain'ny solontenan'izy ireny fa mbola mandalina ny fangatahan-dry zareo sy ireo porofo ny Kaomity misahana ny Valanjavaboary, izay ahitàna mpikambana avy amin'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana, ny Tetibola sy ny Toekarena, ary mbola anatin'ny fifampiresahana amin'ireo mpitrandraka ireny toby famokarana herinaratra ahodin-drano ireny.
Nampahafantatra fotsiny ny daholobe ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana momba ny anton'ireo fifampiresahana:
Amin'izao fotoana izao, ao anatiny indrindra ny fifampiresahana ifanaovana amin'ireo rehetra mpitrandraka nomena alàlana, izay voafaritry ny andininy faha-17 amin'ny lalàna momba ny filazàna ny ampahany amin'ny Tendrombohitra Shar ho faritra arovana tafiditra anatin'ny sokajy faharoa, valanjavaboary nasiônaly iray nametrahana faritra fiarovana vonjimaika vitsivitsy. Ireto avy izany: MHEC Pena 82, MHEC Ljubotenska 66, MHEC Vratnichka 67, MHEC Belovishka 107, MHEC Mazdracha, ary ny MHEC Leshochka 100 sy 101.
Ao anatin'ireo, nametraka fanambaràna ny mpitrandraka ny toby madinika famokarana herinaratra ao amin'ny Leshochka 100 sy 101 fa hisintaka amin'ny fampiasambolany ary tsy mitaky fanonerana, raha ny mpitrandraka ny Pena 82, Ljubotenska 66, Vratnichka 67 sy Belovishka 107 kosa nametraka fitakiana fanonerana ny fampiasambola nataony ho fanatanterahana ny fifanarahana hatramin'izao fotoana izao.
Fanorenana toby madinika famokarana herinaratra ahodin-drano ao amin'ny Tendrombohitra Shar, 2021. Saripikan'ny Portalb.mk, fampiasàna nahazoana alàlana.
Efa hatry ny ela ireo fikambanana sivily no nanosika ny governemanta hampitsahatra ireo fotodrafitrasa mpamokatra angovo ireo. Isan'ny hita ao anatin'ireo antony ny fanimbàna mivandravandra ny natiora sy ny fahavoazana aterany amin'ny zavamiaina, satria amin'ny ankapobeny dia avilin'ireo mpitrandraka ireo ho anaty fantsona ny rano avy amin'ireo riandrano sy renirano, ka miteraka haintany voatrolombelona any amin'ireo faritra manodidina, mitarika fahasimban'ny ala sy fitaran'ny tany hay.
Manelingelina koa ny fahazoana rano fisotro madio ho an'ireo mponina amin'ny faritra manakaiky azy ny fametrahana ireo toby madinika famokarana herinaratra ahodin-drano. Ohatra, ny tanànan'i Tetovo, eo akaikin'ny Valanjavaboary Nasiônaly Shar Planina, dia miatrika tsy tapaka ny tsy fahampian'ny rano fisotro.
Ambonin'izay, ny fandalinana iray tamin'ny 2021 nataon'ny Center for Economic Analysis (CEA) sy ny fkambanana mpiaro tontolo iainana Eko Svest (“Eco Consciousness”) dia namoaka fa ny fenitra manontolo momba ireo fanampiana ara-bola omen'ny Fanjakàna an'ireo toby madinika mpamokatra herinaratra ahodin-drano ireo dia tsy mifanaraka amin'ny fepetra napetraky ny Fiombonambe Eorôpeàna (UE), mahatonga azy ho sakana amin'ny fampandrosoana ny firenena, tanjona stratejikan'ny fidirana ao anatin'ny UE.
Etsy ankilany, ireo toby madinika famokarana herinaratra ahodin-drano dia mitondra fandraisana anjara kely amin'ny famatsiana herinaratra ao amin'ny firenena, tsy mihoatra ny dimy na fito isanjato eo ho eo.
Tao anaty fanambaràna iray nalefa ho an'ny Meta.mk, Gjorgji Mitrevski, solontenan'ny Eko Svest, dia nanipika fa andrandrain'ireo mpiaro tontolo iainana ny hanajàna ireo fepetra takian'ny fifanarahana tao Bern.
Andrasana amin'ireo firenena nanasonia ny Fifanarahana tao Bern ho fiarovana ny harena voajanahary ny fampiharana ireo tolokevitra ao anatin'ny lalàna nasiônaly. Manana fifandraisana tsy tapaka amin'ilay Fifanarahana isika, ary nanomboka tamin'ny fotoana izay nanekena ireo tolokevitra ka mandraka androany, na iray aza tsy nisy hetsika natao.
Voamarik'i Mitrevski fa efa am-bolana marobe lasa ny Fifanarahana tao Bern dia nanolo-kevitra ny amin'ny hisorohana ny fananganana toby famokarana herinaratra any anaty faritra arovana. Nisy fangatahana tsy misy hafa amin'izany navoaka tamin'ny 2015 sy 2017 momba an’ Mavrovo, valanjavaboary nasiônaly iray hafa ao Makedônia Avaratra. Mbola misy ihany koa tolokevitra maharitra milaza ny hoe ireo fotodrafitrasa famokarana angovo dia tsy tokony haorina eo ivelan'ireo faritra arovana raha toa misy fiantraikany amin'ireo faritra arovana ny fanorenana azy ireny. Notsindrian'i Mitrevski fa io dia milaza mazava tsara fa ireo fotodrafitrasa rehetra voavolavola haorina anatin'ireo valanjavaboary nasiônaly dia tsy tokony haorina, ary tokony haverina dinihana ny momba ireo naorina eny ivelany.
Ny governemantan'ny Repoblikan'i Makedônia Avaratra no handray ny fanapahankevitra farany momba ny fanonerana ireo mpitrandraka, hoy ny Ministeran'ny Tontolo Iainana tao anaty fampitambaovao nomena ny Meta.mk.
Topimaso amin'ny vohitr'i Bozovce, ao anatin'ny faritry ny valanjavaboary nasiônaly Shar Planina ao Makedônia Avaratra. Saripika an'ny Meta.mk, fampiasàna nahazoana alàlana